Ny fitomboan'ny toekarena - ny antony mahatonga ny toe-karena aloka
Ny toekarena aloka dia ny foto-kevitra sy ny fototry ny toekarena lonaka
Ny hetra goavana, ny faneriterena sy ny fitsiriritana maro dia mahatonga ny olona hitantana ny raharaham-barotra ao anatin'ny aloka mba handikana ny lalàna sy hahazoana tombony. Ny business shadow dia mitondra fatiantoka goavana eo amin'ny toekarena ao amin'ny fanjakana ary ilaina ny miady amin'ny tolona mavitrika amin'izany.
Inona ny toekarenan'ny aloka?
Ny hetsika izay miteraka tsy voafehy sy tsy misy fitantanam-panjakana dia antsoina hoe ekonomia manjopiaka. Misy antony maromaro manosika ny bika aman'endriny. Ny fotokevitra sy ny fototry ny toekarena lonaka dia nodinihina nandritra ny taona maro, ary ny famaritana sy ny fanakanana ny hetsika tsy ara-dalàna dia toetra manan-danja ho an'ny fampandrosoana tanteraka ny fiaraha-monina sy ny firenena. Nampiasaina tamin'ny 1970 io teny io.
Ny toekarena manjombona dia manana dindo sy fifandraisana ara-dalàna amin'ny sehatra tena izy eo amin'ny sehatra ara-toekarena, ary mampiasa tolotra ho an'ny daholobe, ohatra, ny asa na ireo fotodrafitrasa sosialy. Izany asa tsy ara-dalàna izany dia manampy hahazoana tombom-barotra goavana, izay tsy voatery haba, ary tarihina fotsiny amin'ny fanangonam-bola manokana.
Misy karazana toekarena marobe izay mamorona rafitra iray:
Volo fotsy . Ity safidy ity dia midika fa miasa amin'ny asa ofisialy ny olona miasa, izay miteraka ny fizarana ny vola miditra. Ny foto-kevitry ny toekarena aloka, dia manondro fa ny lohahevitra amin'ny hetsika toy izany dia olona avy amin'ny fiarahamonina mpandraharaha manana toerana ambony. Ny "mpiasan'ny fotsy hoditra" dia mampiasa ny toerana ofisialy sy ny fahadisoana ara-dalàna ao amin'ny lalàna. Mba hampiharana ny heloka bevava dia ampiasaina matetika ny teknolojia maoderina.
Gray . Ny firafitry ny toekarena lonaka dia ahitana karazana orinasa tsy ara-dalàna, izany hoe, raha zakan'ny lalàna ny asany, saingy tsy voasoratra izany. Ny orinasam-pandraharahana amin'ny ankapobeny dia ny fampiroboroboana ny varotra sy ny varotra samihafa. Ity karazana ity no mahazatra indrindra.
Black . Io no toekarena misy ny heloka bevava voalamina, mifandray amin'ny famokarana sy fizarana zavatra voararan'ny lalàna (fihaza, fitaovam-piadiana, zava-mahadomelina).
Ny voka-tsoa sy ny fikorontanan'ny toekarena lonaka
Fantatry ny maro fa ny fiasa tsy ara-dalàna sy miafina avy amin'ny fanjakana dia manjary tsy manara-danja ny fenitra iainan'ny olona sy ny toe-draharaha ankapobeny ao amin'ny firenena, saingy vitsy no mahatsapa fa manana tombontsoa manokana ny toekarena alokaloka amin'ny tranga sosialy sy toekarena. Raha ampitahaintsika amin'ny lafin-javatra sy ny tsy fisian'ny asa toy izany, dia manjary mavesa-danja kokoa ny fahadisoana.
Ny tsy fahampian'ny toekarena aloka
Firenena maro no miezaka mafy miady amin'ity olana ity, satria misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatra maro sy ny fampandrosoana ny fiarahamonina.
Mamafa ny fivoaran'ny toe-karena eo amin'ny sehatry ny toe-karena, ohatra, mitombo ny harin-karena faobe, mitombo ny tsy fisian'ny asa, sy ny sisa.
Mihena ny vola miditra amin'ny fanjakana, satria tsy mandoa hetra ireo orinasa izay manao hetsika tsy ara-dalàna.
Mihena ny fandaniana amin'ny paikady ary ny mpiasa ao amin'ny sehatry ny tetibola, ny fisotroan-dronono sy ny vondron'olona hafa mahazo ny fandoavam-bola ara-tsosialy.
Ny fandrika ny toekarena manjombona dia mifandray amin'ny zava-misy fa mitondra anjara birikiny amin'ny fitomboan'ny kolikoly, fa ny kolikoly kosa dia mandrisika ny fivoaran'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Ho an'ny toekarena lonaka
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny lafiny tsara amin'ny hetsika tsy ara-dalàna dia vitsy, fa izy ireo dia:
Ny vokatra tsara ateraky ny toekarena manjombona dia noho ny hetsika ataon'ireny karazana fampiasam-bola ireny amin'ny sehatra ara-dalàna.
Izany dia karazana fandrindrana fako ho an'ny drafitra efa misy eo amin'ny fifandraisana ara-toekarena. Azo atao izany noho ny famerenana ny harena eo amin'ny sehatra nahazoana alalana sy voarara.
Ny toekarena manjavozavo dia misy fiantraikany amin'ny vokatry ny krizy ara-bola rehefa misy ny famoizana marobe ataon'ny mpiasa izay afaka mahita toerana ao amin'ny sehatra tsy ara-dalàna.
Ny toekarena lonaka sy ny kolikoly
Efa voalaza teo aloha fa mifamatotra ireo hevitra roa ireo ary antsoina hoe kambana ara-tsosialy sy ara-toekarena izy ireo. Ny maha-zava-dehibe ny toekarena sy ny kolikoly dia mitovy amin'ny antony, tanjona ary antony hafa.
Ny hetsika tsy ara-dalàna dia mety hivoatra amin'ny toe-java-misy raha manimba ny sampana rehetra eo amin'ny fitondrana sy ny governemanta.
Ny asa ivelan'ny lalàna dia manampy amin'ny fananganana fifandraisana amin'ny kolikoly any amin'ny faritra rehetra izay misy fiantraikany eo amin'ny fisian'izany.
Ny kolikoly dia mahatonga ny orinasa tsy ara-dalàna ho aloka, ary mamorona fototra ho an'ny fikarakarana sehatra vaovao ho an'ny orinasa shadow.
Ireo hevitra roa voalaza ireo dia ny fototry ny fifandraisana ara-bola.
Ny antony mahatonga ny toe-karena aloka
Ny antony lehibe miteraka ny fisian'ny hetsika tsy ara-dalàna dia ahitana:
High taxes . Matetika ny raharaham-barotra no tsy mahasoa, satria ny tombony rehetra dia mandoa hetra.
Biraon'ny biraon'ny ambony . Raha manoritsoritra ny antony mahatonga ny toekarena manjombona, dia tsy afaka manadino ny fahatsapan'ny birapetra-panjakana ny dingana rehetra ilaina amin'ny fanitsiana sy fitantanana raharaham-barotra.
Fanitsakitsahana tafahoatra ny fanjakana . Olona maro miasa amin'ny orinasa ara-dalàna no mitaraina fa matetika ny sampan-draharahan'ny hetra no mitazona fanaraha-maso, mametraka lamandy ary toy izany.
Fanasaziana madinika noho ny famoahana hetsika tsy ara-dalàna . Ny famatsiam-bola hotanterahina amin'ny olona iray izay manao hetsika tsy ara-dalàna, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia kely noho ny tombom-barony.
Fotoan-tsarotra mahazatra . Mandritra ny fihenan'ny ara-toe-karena dia tsy mahasoa ny asa ara-toe-karena ara-dalàna ary avy eo ny tsirairay dia miezaka ny miditra ao anaty aloka.
Ny voka-dratsy ateraky ny toekarena manjombona
Ny raharaham-barotra tsy ara-dalàna dia tranga mampivarahontsana izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny rafitra ara-toekarena ao amin'ny fanjakana. Mba hahafantarana hoe nahoana no ratsy ny toekarena manjombona, mila jerena ny lisitr'ireo vokatra ratsy.
Misy fihenam-bidy ny tetibolam-panjakana, satria tsy misy ny fandaniana hetra.
Noho ny fiantraikan'ny trosa sy ny sehatra ara-bola, misy fiovana ratsy eo amin'ny rafitry ny fitaterana sy ny fanentanana ny fandaniana .
Ny vokatr'izany toe-karena izany dia mifandraika amin'ny hetsika ara-toekarena vahiny, satria misy ny tsy fahatokisana amin'ny mpampiasa vola vahiny.
Ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana dia mihamitombo hatrany. Vokatr'izany, mitombo ny fivoaran'ny toe-karena eto amin'ny firenena ary mijaly ny fiarahamonina manontolo.
Maro ireo fikambanana miaina ambanin'ny tany no tsy manaraka ny fenitry ny tontolo iainana mba hampihenana ny fandaniana ary amin'ny tsy fisian'ny famatsiam-bola, izay manimba ny toetry ny tontolo iainana.
Noho ny fitomboan'ny toekarena dia miharatsy ny fepetra amin'ny asa, satria tsy raharahian'ny orinasa ny lalàna momba ny asa.
Fomba fanoherana ny toekarena lonaka
Tena sarotra ny fiatrehana ireo hetsika tsy araka ny tokony ho izy, raha oharina amin'ny haben'ny famaritana. Ny ady amin'ny toekarena manjombona dia tokony ho tanteraka sy hifanaraka amin'ny endrika samihafa.
Manao fanavaozana ny rafitra hetra izay hanampy amin'ny fampidinana ampahany amin'ny fidiram-bola avy any am-potony.
Famaizana sazy mihatra amin'ireo manampahefana mpanao kolikoly.
Ny fampidirana fepetra hamerenana ny renivola manondrana avy any amin'ny firenena ary hampisy ny toetr'asa fampiroboroboana fampiroboroboana mba hampitsaharana ny fandaniana ara-bola.
Ny famaritana ny orinasa izay miasa ambanin'ny tany, ary ny fampitsaharana ny asany.
Ampitomboy ny fanaraha-maso ny vola mavesatra, izay tsy hanome fahafahana handrobana vola be.
Ny fampihenana ny tsindry amin'ny asa ataon'ny fanjakana, ohatra, ny fampihenana ny isan'ny manampahefana sy ny fanaraha-maso.
Ny fandraràna ny fepetra tsy voafehy sy ny fampisamboram - bola .
Famerenana ny fahefana eo amin'ny fitsarana sy ny manampahefana hafa. Tokony henjana ny lalàna.
Ny literatiora momba ny toekarena lonaka
Ny raharaham-barotra tsy ara-dalàna dia dinihin'ny mpahay toekarena tsara, izay mahatonga ny literatiora samihafa amin'ity lohahevitra ity.
"Ny toekarena lonilony" Privalov K.V. Ny boky fampiofanana dia manolotra fomba vaovao entina handikana ity hevitra ity. Ny mpanoratra dia mandinika ny olana momba ny evolisiona sy ny vokany samihafa amin'ny orinasa tsy ara-dalàna.
"Fepetra ho an'ny fiantraikan'ny fanjakana eo amin'ny toekarena lonaka" L. Zakharova . Ny mpanoratra dia liana amin'ny fandehan'ny tolona manohitra ny toekarenan'ny aloka, ny boky dia manintona amin'ny fomba maro.
Karazana asa inona no manavao ary inona no takiny amin'ny tontolo maoderina?
Ahoana no hahazoana vola?
Afaka mahazo asa ho an'ny vehivavy bevohoka ve aho?
Antony hanafoanana ny fifanarahana asa
Ny fomba hanombohana ireo saka nohavaozina - ny sorona ny saka ketsa toy ny orinasa
Ahoana ny fialana amin'ny tsy fananana asa?
Women's Denim Capri 2013
Ahoana ny fandrefesana ny mari-pahaizana fototra sy ny fandaharam-potoana?
Earrings of Falcons
Tsara ve ny manoroka an'ilay tovolahy?
Ny kapa ho an'ny vehivavy - ireo modely modely sy tsara indrindra
Isam-bolana amin'ny volana voalohan'ny fitondrana vohoka
Ankamantatra ho an'ny ankizy
Kitapo miaraka amin'ny fofom-bary
Bear Tattoos - Meaning
Fiarandalamby tsara indrindra 2014
Ny voninkazo tsara tarehy indrindra eran'izao tontolo izao - safidy izay tsy mamela na iza na iza
8 zava-misy momba ny divay mena